Gasoline စွမ်းအင်သုံး ကားတစ်စီး ဖြစ်လာဖို့ သေချာနေတဲ့ 2022 Honda Civic Type R ! – MyMedia Myanmar
Gasoline စွမ်းအင်သုံး ကားတစ်စီး ဖြစ်လာဖို့ သေချာနေတဲ့ 2022 Honda Civic Type R !
All-New Model တစ်စီးအဖြစ် ပွဲထွက်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Honda Civic Type R ကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ ထဲမှာ စတင်ရောင်းချနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ မျိုးဆက်နဲ့ မတူညီတဲ့ အဆိုပါ ကားအသစ်ဟာ ဆိုရင် မနှစ်ကနှောင်းပိုင်း လောက်မှာ Swindon စက်ရုံ ပိတ်သိမ်း လိုက်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ UK မှာ အခြေပြု တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ပဲ အမေရိကမှာပဲ တည်ဆောက် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ 2022 Type R ဟာ ဂျပန် ကားကုမ္ပဏီ အတွက် ခေတ်သစ် တစ်ခုရဲ့ နောက် ဆုံး ကားတစ်စီးလို့ သတ်မှတ်ချင်စရာ အကြောင်း အချက် အလက်များစွာ ရှိလို့နေပါတယ်။ Autocar ရဲ့ သတင်းအရ ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ Type R အမျိုးအစား အသစ်ဟာ ယခင် ၁၁ ခုမြောက် မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Civic အပေါ်မှာ အခြေခံ ထုတ်လုပ် လာမှာ ဖြစ်ပြီး Honda က ထုတ်လုပ်သမျှထဲမှာ Gasoline စွမ်းအင် နဲ့ မောင်းနှင်လို့ရမယ့် နောက်ဆုံးသော ကားတစ်စီး ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါပဲ။ Honda အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်သမျှ ကားအမျိုးအစားတွေ အားလုံးကို လာမယ့် ၂၀၂၂ က စလို့ Hybrid ဒါမှမဟုတ် လျှပ်စစ်စွမ်း အင် သီးသန့် သုံးနိုင်မယ့် ကားတွေ ချည်းပဲဆက်တိုက် ထုတ်လုပ် သွားတော့မှာပါ။
အခုလိုမျိုးလျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကူးပြောင်းဖို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး နဂိုမူလ ကုမ္ပဏီ ဘက်ကနေ သတ်မှတ် ထားတာ ဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ ဖြစ် ပေမယ့် အခု ဆိုရင်တော့ Honda ဟာ ယခင်ထက်ကို ပိုပြီး အရှိန်မြှင့်ကာ ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်ဆောင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ထွက် ရှိလာမယ့် Type R အသစ် ရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းမှာတော့ လက်ရှိ ကားရဲ့ 2.0 Liter Turbocharged Engine ကိုမှ Direct Injection နည်း ပညာနဲ့အတူ အဆင့်မြှင့်တင် ပေးလာမှာ ဖြစ်ပြီး ကားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဆီစား သက်သာမှု တွေ မှာလည်း တိုးတက်အောင် ဖန်တီး မှုတွေ ပြုလုပ်လာဦးမှာပါ။ လက်ရှိ ကားမော်ဒယ် ကတော့ စွမ်းဆောင်ရည် အနေနဲ့ 306 hp နဲ့ 295 lb-ft Torque အထိ ရှိထားတာ ဖြစ်ပြီး Front-Wheel Drive အနေနဲ့ ပွဲထွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုထပ်မံ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်း တစ်ချို့အရ တော့ Honda ဟာ ကားအသစ်မှာ AWD Setup ကို အသုံးပြုလာနိုင်ပြီး 400 hp လောက် အထိကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်သွားမယ်လို့ သိထား ရတာ ဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်း လုပ်ဆောင်လာနိုင်မယ် ဆိုရင်လည်း သိပ်ပြီး အံ့အားသင့်စရာတော့ ရှိလာဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြန်လည် ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ အခြားသော အချက်အလက်တွေ မှာတော့ Dual-Axis Strut Front Suspension နည်းပညာ ၊ အဆင့်မြင့် Limited-Slip Differential စနစ်အပြင် Multi-Link Rear Suspension Set-Up ကိုလည်း အသုံးပြုပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားကို မောင်းနှင်မယ့် သူတွေအတွက်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Unique Driving Modes တွေကိုရွေးချယ် နိုင်ဖို့အတွက် Adaptive Damping စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းလာနိုင်ကာ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် သာမန် မောင်းနှင်တာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပိုပြီး တော့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမယ့် မောင်းနှင်မှုပုံစံ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အပြင်ပိုင်း ဒီဇိုင်း ကတော့ လက်ရှိ မြင်ရသလောက် အနေအထားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ လ တုန်းက ထွက် ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Civic Sedan Prototype နဲ့ ပုံစံ တူ လာနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလို‌တာကတော့ ကားဟာ ယခင်လိုပဲ Sport ဆန်ဆန် ပုံစံကိုမှ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ အသွင်နဲ့ ထွက်ပေါ်လာနိုင်တာ ဖြစ်ကာ အနောက်ဘက်မှာ Rear Wing နဲ့အခြားသော Aero Items တွေလည်း အစုံအလင် ပါဝင်လာမှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Civic Lineup တစ်ခုလုံး အတွက် အတွင်းခန်းပိုင်း အနေနဲ့ကတော့ ပိုပြီးတော့ Toned-Down ဖြစ်စေမယ့် အသွင်အပြင်နဲ့ အတူ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို မြင်တွေ့လာရမှာ ဖြစ်ကာ Touchscreen ကိုလည်း အကြီးစား ထည့်သွင်းပြီး သာမန် ခလုတ်တွေကိုလည်း လျှော့ချ လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ လက်ရှိ မော်ဒယ်တွေနဲ့ သိပ်ပြီး မကွာခြားလာနိုင်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ မော်ဒယ် အတွက်တော့ ဒေါ်လာ ၄၀၀ လောက် ဈေးနှုန်းမြင့်တက် ခဲ့တာ ကို သတိပြုရမှာပါ။ သေချာတာ ကတော့ အခု Civic Type R အသစ် ဟာ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး ကားတွေ ဘက်ကို ကူးပြောင်း သုံးစွဲဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ် သေးမယ့် သူတွေအတွက် တကယ့်ကို အကြိုက်တွေ့စရာ ‌ရွေးချယ်မှုတစ်ရပ် လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အခြားသော ဈေးကွက်တွေ အတွင်းမှာတော့ ဘက်ထရီ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံးကား တွေကိုသာ မြင်တွေ့ ရတော့ မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Gasoline စွမ်းအင်သုံး ကားတစ်စီး ဖြစ်လာဖို့ သေချာနေတဲ့ 2022 Honda Civic Type R ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-13T18:30:32+06:30January 13th, 2021|MYCARS MYANMAR|
Mercedes Benz ရဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး G-Class ကို ၂၀၂၄ မှာ စတင်မိတ်ဆက်မည်!
Toned-Down Design နဲ့ Spy Shots တွေထဲ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ Honda Civic Type R အသစ် !
2022 Subaru BRZ အတွက် ဈေးနှုန်းများ ထွက်ပေါ်လာ !
Dashboard ဒီဇိုင်း အသစ် နဲ့ မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ 2022 Kia Niro ရဲ့ အတွင်းခန်း!
အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေနဲ့ ပြည့်နှက် နေတဲ့ Porsche ရဲ့ ဒေါ်လာသန်းချီတန် Service Center!
၂၀၂၁ ဒုတိယလေးလပတ် အတွင်း ကမ္ဘာ့ ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်မှာ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရောင်းအားတက်ခဲ့တဲ့ Harley Davidson!
Trim နာမည် အလန်းတွေ ပါဝင်လာမယ့် Kia EV6!
Hyundai Accent ကို ၁၉၆၉ စတိုင် Ford Mustang အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ Dream Customs India !
13.9 Quintillion ရှိ အပြင်ပိုင်း အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Pininfarina Battista New York City ကား!
Apocalypse Warlord လို့ နာမည် အကြမ်းစား ပေးလာနိုင် တဲ့ ဘီးခြောက်ဘီးပါ Ram 1500 TRX!
ကားနဲ့ လိုက်အောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နာမည်နဲ့အတူ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Hyundai ရဲ့ အသေးဆုံး SUV !
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ နောက်ဆုံးရ မနက်ခင်း ဘောလုံးသတင်းများ (25.7.2021)